आलुको साथ स्विस चार्ट | ThermoRecines
Verduras39 मिनेट2 व्यक्ति
यस विधिबाट आलुको साथ स्विस चार्ट यो हल्का दैनिक डिनर तयार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन तपाईंलाई तरकारीहरू खान मद्दत गर्दछ र तपाईंको आहारमा फाइबर समावेश गर्दछ। यो उनीहरूको लागि पनि उपयुक्त छ जो आफैंको हेरचाह गर्न चाहन्छन र जो एक वजन नियन्त्रण आहार पछ्याउँछन्।
थप रूपमा तपाईं सक्नुहुन्छ अग्रिम गर र घर पुग्दा यसलाई तयार राख्नुहोस्। यद्यपि यो पनि हो यातायात गर्न सजिलो र यो आफूसँगै अफिसमा खानको लागि लैजानुहोस्।
तपाईं यी आलुहरूलाई केहीको चार्टको साथ समृद्ध गर्न सक्नुहुन्छ हेम वा टोफु क्यूब्स यसलाई अझ धनी बनाउन।
1 आलुको साथ स्विस चार्ट
हल्का डिनरका लागि स्वस्थ डिश।
खाना पकाउने समय: 39M
कुल समय: 39M
ताजा र सफा चार्टको 500 ग्राम
२ मध्यम आलु, टुक्राहरूमा काटियो
मीठो मिर्च को एक चम्मच
हामीले भारोमा कन्टेनरमा भाँडा राख्यौं र भाँडामा हालेर काट्यौं र टोकरीमा काट्यौं।
हामी पानीलाई गिलासमा राख्छौं र टोकरी भित्र राख्छौं। हामी ढकनी राख्छौं र शीर्षमा चार्ट संग भारोमा राख्छौं।
हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
समय पछि हामी आलु र चार्ट र रिजर्भ बाहिर निकाल्दछौं।
हामी पानीलाई खारेज गर्छौं, यसलाई अर्को रेसिपीको लागि सुरक्षित गर्दैछ वा हामी चरण in मा थोरै पानी थप्न चाहन्छौं भने।
सिसा नधोई हामी यसलाई किचनको कागजले सुकाउँदछौं।
गिलासमा लसुनको लौंग थप्नुहोस् र क्रश गर्नुहोस् Seconds सेकेन्ड, गति 4.
तेल र फ्राई थप्नुहोस् Minutes मिनेट, तापमान º ० डिग्री, गति २। अन्तमा हामी तापक्रम ड्रप गर्न र प्याप्रिका थप्न केही मिनेट पर्खन्छौं।
हामीले पुतली ब्लेडमा राख्यौं र चार्ट र आलु थपे। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
थप जानकारी - प्याज र टमाटर सॉस संग चिकन
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सलाद र तरकारीहरू, भेगन, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » आलुको साथ स्विस चार्ट
मारी जोस भन्यो
नमस्ते, यो नुस्खा मेरो लागि उत्कृष्ट छ, किनकि मैले यस प्रकारको तरकारीहरू केवल एउटा "भाँडो" मा बनाएको थिइनँ र पहिले नै भुटेको थिएँ, राम्रो। म माथि आलु कुचल्छु, यसमा अलिकति ग्रेटेड चीज राख्छु, क्रस्ट बनाउँछु र ग्रेटिन गर्छु।
मारी जोसलाई जवाफ दिनुहोस्
पनीरको बारेमा धेरै राम्रा विचार मारी जोस र उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्, अर्को पटक म प्रयास गर्नेछु ...
मानिस, पक्कै पनि म गर्छु। यो स्वादिष्ट हुनुपर्दछ, तर म बेकमल र चीज चीजको साथ खतरामा रेखा देख्न सक्छु।
यो सत्य हो, Adela। बेचामेलले खानालाई मद्दत गर्दैन, हा हा हा।
नमस्कार, पृष्ठमा बधाई हो, म यस विधिलाई लामो समयदेखि थर्मोमिक्स कुकबुकमा खोज्दै छु, र मैले तपाईंलाई फेला पारे! व्यंजनहरु साझा को लागी धन्यवाद .. बधाई छ!
स्वागत छ, कार्ला। म खुशी छु कि तपाईंले यो पाउनुभयो र मलाई आशा छ कि तपाईं हाम्रा व्यंजनहरू मनपराउनुहुनेछ। हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। एलेना
हामी क्रिसमसको तयारी गर्दैछौं जुन पहिले नै यहाँ छ र यो दंगा हो। अह…?
हो जोआक्विन, सत्य यो हो कि आफैंको हेरचाहको बारेमा सोच्नको लागि राम्रो लाग्दछ किनकि क्रिसमस केवल केही पूलहरूको वरिपरि छ।
केहि धेरै राम्रो चार्ट। मैले भर्खर तपाईको वेबसाईट पत्ता लगाएको छु र तपाईका व्यंजनहरुबाट म खुशी छु। सबैलाई साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। अभिवादन।
सुसाना हाम्रो ब्लगमा स्वागत छ र मलाई खुशी छ कि तपाईले हाम्रो व्यञ्जनहरू मनपराउनुहुन्छ र दिनहुँ तपाईंलाई विचारहरू दिनुहुन्छ।
जे होस् मँ यहाँ टिप्पणी छ, यो कुनै पनि नुस्खा को लागी मान्य छ।
जब उसले तपाईलाई पत्ता लगाए, म सबै दिन आश्चर्यचकित छु।
आज म के गर्दैछु? म यो भन्दा एक अविश्वसनीय खेल प्राप्त गर्दै छु। तपाईंलाई धन्यवाद।
मलाई अलिकति शंका छ, उदाहरणका लागि यो नुस्खामा तपाईले शब्दशः भन्नुहुन्छ: "हामी 25 मिनेट, वारोमा तापमान, गति2प्रोग्राम गर्छौं।"
मेरो प्रश्न हो;
के समय गणनाबाट शुरू हुन्छ जब भारोमा तापमान पुग्छ? ।
होईन, जोअक्विन। तपाईले यसलाई प्रोग्राम गर्नुपर्नेछ जुन हामीले यसलाई सेट गरेको छ, २ minutes मिनेट, कहिले नहोस् भेरोमा तापमान पुग्दा। शुभकामना।
जोआक्विन यो आवश्यक छैन कि तपाईंले यसको तापक्रममा पुग्न प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ, जुन तपाईंले व्यर्थमा बताउनुभएको समय पर्याप्त छ। हामी सबै रेसिपीहरू बनाउँछौं जुन हामी प्रकाशित गर्छौं र समय जाँच गरिन्छ। उही समयको साथ प्रयास गर्नुहोस् जुन हामी इंगित गर्दछौं कि ती तपाईंको लागि राम्रो हुनेछ।
मसँग 21 के 31 लाई समान सेवा छ? धन्यबाद, मसँग पनि यस्तै कुरा धेरैलाई हुन्छ "जबदेखि मैले तपाईलाई पत्ता लगाएको छु म यसलाई प्रयोग गर्छु" र त्यो 12 वा 13 वर्ष पुरानो हो धन्यवाद
NURIA लाई जवाफ दिनुहोस्
जुआन फर्नांडीज भन्यो
तपाईको कामका लागि धेरै धन्यबाद, हामी मध्ये एक जो हामी बाहिर जाँदा इन्टरनेट छैन को एक प्रश्न
Pdf मा रेसिपीहरू डाउनलोड गर्न सम्भव छ?
जुआन फर्नांडीजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते जुआन, हामी यसमा काम गरिरहेका छौं र मलाई आशा छ कि चाँडै हामीसँग प्रत्येक रेसिपीमा त्यो विकल्प हुन्छ। हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
नमस्कार, तपाईं दोस्रो माउस बटनको साथ पाठ र फोटो छनौट विधिमा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिलिपि गर्न क्लिक गर्नुहोस्, तपाईं खाली शब्द कागजात वा एउटा नोटप्याड खोल्नुहुन्छ, तपाईं पहिलो लाइनमा जानुहुन्छ र तिनीहरूलाई टाँस्नुहोस् र त्यस्तै भयो। तपाईंको कम्प्युटरमा नुस्खा।
आशा छ यसले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ।
खैर ... तपाईको ब्लग को लागी धेरै धन्यबाद, यो पहिले नै मेरो सामान्य प्रश्नहरु मध्ये एक हो।
नमस्कार म औं र सत्य यो म चार्ड लागि यो नुस्खा बनाउन र म एक pureeeeeeeeeeeeeeeee uqe penaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa धन्यवाद प्राप्त jopeeeeeeeeeeee दोस्रो समय हो छ 21 छ
आर्य मलाई माफ गर्नुहोस्, के यो TM-21 मोडलको साथ गर्नका लागि तपाईंले ब्लेड र गती 1 मा पुतली राख्नुपर्नेछ, किनभने तपाईंको बायाँ मोड छैन र त्यसपछि ब्लेडले चार्ट र आलुलाई कुचल्नेछ। यो जस्तै कोसिस गर्नुहोस् र मलाई कसरी भन्नुहोस्।
No man !!! मलाई पहिले नै थाहा छ कि मैले पुतली र गती १ राख्नुपर्दछ, म समानताहरू जान्दछु किन भनेर म तपाईंलाई सोध्छु तर उनीहरूले मलाई पनि कुचल्छन् कि हुन सक्छ यो खाना पकाउन लामो समय हो? वा के?
जवाफ दिनु भएकोमा धन्यवाद
एर्रीले मलाई यो जस्तो फिट पारे जस्तो तपाईले फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, सायद मेरो स्वादको लागि तपाईंले कम तेल थप्न सक्नुहुन्छ ताकि तिनीहरूलाई हल्का बनाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईं दायाँ हुन सक्नुहुन्छ र बाँया पट्टि नबढेर तिनीहरूलाई minutes मिनेट राख्नु पनि हो। TM-9 मोडेलको लागि धेरै, मात्र minutes मिनेटको साथ परीक्षण गर्नुहोस् र तपाईंलाई अधिक आवश्यक भएमा तपाईंले देख्नुहुनेछ।
तपाईं केटीहरू अद्भुत छन्, मैले तपाईंको धेरै भन्दा पहिले नै खाना बनाउने विधिहरू प्रयोग गरिसकें र ती सबै धेरै नै धनी छन् र मलाई जे मनपर्दछ, एक मिलियन धन्यवाद र म तपाईंसँगै खाना पकाउन जारी राख्नेछु, फेरि धन्यवाद र चुम्बन इटालीबाट।
सिल्भिया मलाई खुशी छ कि तपाईंलाई हाम्रो ब्लग मनपर्‍यो र यसले तपाईंलाई पकाउने विचारहरू दिन्छ। मलाई चम्चाको व्यंजनहरू पनि मन पर्छ।
हामीलाई इटालीबाट हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। चुम्बनहरू।
लोला रे भन्यो
हामीलाई यो ब्लग प्रस्ताव गर्नुभएकोमा धन्यबाद। यो ठूलो सहयोग हो। खुशी!
लोला रेसलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईका शब्दहरूका लागि लोलालाई धन्यबाद, तपाईले हामीलाई दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित पार्नुहुन्छ यस प्रोजेक्टको साथ जारी राख्नका लागि।
Tod @ s! नमस्कार! सबैका लागि धन्यबाद; मूर्ख मूर्ख प्रश्न सोध्नुहोस्। जब तपाई भन्नुहुन्छ कि हामी चार्ट र आलुलाई भेरोमा बनाए पछि हामी लसुन थप्नु अघि शीशाबाट पानी हटायौं? धन्यवाद।
हो एलेना, हामी गिलास भित्रबाट पानी हाल्दछौं र एक चटनी बनाउन लसुन थप्दछौं।
सबैलाई नमस्कार, मैले यो भन्दा पहिले नै यो विधि बनाइसकेको छु र यो स्वादिष्ट पनि हो, यसबाहेक यस क्रिसमसको छुट्टिहरूमा आफैले आफैलाई अलि बढी ध्यान दिन राम्रो हुनुको अलावा। म तपाईंलाई यो सिफारिश गर्दछु। सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना र नयाँ सालको शुभकामना !!!!!!
मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन परेको छ, अरसेली। सत्य यो हो कि हामीले यी पार्टीहरूमा आफूलाई बढी हेरविचार गर्नुपर्दछ जुन हामी अचाक्ली खालि झुकाव राख्छौं। बधाई र २०११ को शुभकामना!
मैले भर्खर तपाईको ब्लग पत्ता लगाए र म खुशी भए, किनकि मलाई खाना पकाउन मन पर्छ र म Thermomix धेरै प्रयोग गर्दछु।
तपाईको शानदार कामका लागि बधाई!
स्वागत छ, टेरेसा! तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म धेरै खुसी छु। अभिवादन र हामीलाई धेरै धेरै धन्यबाद हामीलाई भेट्न को लागी।
नमस्ते केटीहरू !!!
मैले भर्खर उनीहरूलाई खानेकुरा बनाएँ र ती…। त्यो धनी पनि छ, कसरी भान्साकोठालाई पप्रिका जस्तै सुगन्ध छ। मैले TM21 को साथ यो काम गरें र मैले खाना पकाउने समय परिवर्तन गरिन, तर पुतली9मिनेट, ट्रा १०० स्पीड १, ती अभूतपूर्व थिए, र तिनीहरूलाई कुचिएन। भोलि म ह्याम र बेक्ड चीजले शंख बनाउनेछु, यो कसरी जान्छ हेरौं।
अभिवादन र एक शुभ सप्ताहन्त छ !!
मरियम, मलाई खुशी छ कि तपाईंले उनीहरूलाई मनपराउनुभएको थियो। अर्को दिन मैले तिनीहरूलाई खानाको लागि बनाएँ र, तपाईंले भन्नु भएको जस्तै, पेपरिका दुखाइले मलाई पागल बनायो।
तपाई हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि कसरी गोलोहरू। शुभकामना
हामीले भर्खर भर्खरै खायौं, कति सुन्दर! तिनीहरू अविश्वसनीय छन्। मैले केहि बाँकी रहेको अवशेषको फाइदा लिएँ र केहि क्वास्डिला बनाएँ, र मैले यर्क ह्याम, बेकनको टुक्राहरू, गौडा चीज र केही मोजारेलाले भरें, थप रूपमा मैले केही काटिएको अखरोट पनि राखें, बच्चाहरूले पनि मन पराए, र मैले पनि तिनीहरूलाई खरिद गरिएको पफ पेस्ट्रीको साथ बनाईएको थियो ..., अर्को समय, म तपाईंको पीठो बनाउनेछु, र मैले जे भर्दछु भनेर म हेर्न सक्छु, म नीलो पनीर र अखरोटको साथ सेरानो हेमको बारेमा सोच्न सक्छु ... हेरौं कसरी यो जान्छ।
के यो पुतलीलाई tm-31 मा राख्नु आवश्यक छ?
बेगोलाई जवाफ दिनुहोस्
आज मैले खानेकुरा तयार पारेको छु। कस्तो राम्रो र धनी।
धेरै कडा अभिवादन।
नमस्ते थर्मोरसेटस.कम व्यक्तिहरू, मैले कच्चा चार्ट सिधा directly्ग बिना नै यो थाल बनाएको छ, यो बिना पकाएको, त्यसैले हामी चार्ट पकाउने चरण छोड्दछौं। यसलाई प्रयास गर्नुहोस् र तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो कति धनी छ, र यस तरीकाले खनिज लवणहरू खाना पकाउने पानीमा रहँदैन
म यसलाई प्रयास गर्ने योजना बनाउँदछु राउल, तपाईको सल्लाहका लागि धेरै धेरै धन्यबाद किनभने म पालकसँग यस्तै केही गर्छु र म तिनीहरूलाई माया गर्छु।
जब तपाईं यसलाई प्रयास गर्नुहुन्छ, तपाईं मलाई भन्नुहोस् यो के लायक छ?
प्रतिज्ञा गरिएको शुभकामना
पछिल्लो रात मैले यो खाना पकाउनको लागि बनाएँ, र यो स्वादिष्ट थियो, मैले यसलाई थर्मोमिक्समा कहिले पनि बनाएको थिएन, किनकी सामान्य भएकोले यसलाई सामान्य भाँडोमा तयार पारेकोले यसलाई थर्मोमा स्टिभ गर्न सुधार गर्न सकिदैन। तर म गलत थियो। बधाई छ
मारिसोल, म यसलाई सधैं मेरो भाँडामा बनाउँदिन तर यहाँ तपाईंले खाना पकाउने पानीमा भिटामिनहरू गुमाउनुहुन्न। यो एक स्वादिष्ट नुस्खा हो, मलाई खुशी छ कि तपाईंलाई यो मनपर्नेछ।
नमस्ते, मलाई तपाईंको व्यंजनहरू मनपर्दछ र अब जब इस्टर आउँदैछ, यो रसोस्किलो रेसिपी हुनुपर्दछ, मलाई थाहा छैन तपाईंसँग छ भने मलाई थाहा छैन, तर म यो बनाउन चाहन्छु र यसलाई बनाउन सक्षम हुनेछु।
सबै चीजको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
भेरोनिका, मैले यो बनाएको छैन, म कल्पना गर्छु तपाईले यो नुस्खा भन्न खोजेको हो। http://www.recetario.es/receitas/11387/rosquillos-fritos.html
हो, धन्यवाद, म त्यो एक जना कुरा गर्दै थिए।
हिजो म मिसिनको साथ मलाई समस्या छ मैले यो मेरो छोरी जेली बीन्स बनाउनको लागि राखें र मेरो आश्चर्यको कुरा के थियो कि यसले तातो नभएको तातोमा पिसेन, र म व्यवस्थापन र समयको बारेमा अलि चिन्तित छु। यो बिना नै हुनेछ, किन म बस्छु त्यहाँ कुनै प्राविधिक सेवा छैन र तिनीहरूले यसलाई उनीहरूले लैजानु पर्छ, तर राम्रोसँग म तपाईंलाई भन्नेछु यो कसरी भयो।
सबैभन्दा पहिले, म तपाईंको सबै व्यंजनहरू मन पराउँछु। यो नुस्खा विशेष गरी फ्रिज गरिएको चार्टको साथ बनाउन सकिन्छ?
UKI लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ यसले तपाईको लागि पनि काम गर्दछ, केवल तपाईले डिफ्रोस्ट गर्नुपर्नेछ र गिलासमा राम्रोसँग खसाल्नु पर्छ। प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस् कसरी।
Castellteçol पीडा भन्यो
नमस्कार फेरी, यहाँ आज तपाईले हाम्रो रात्रिभोज लिनुभयो: आलु र माछाको डुलासहितको चार्ट, धेरै गुडिआइइइइइइइइइइइइइइइसीमो।
र जे भए पनि, यदि तपाइँ खाना पकाउन नुन थप्नुहुन्न, त्यो पानी चार्ट र आलु पकाउन प्रयोग गरिएको बोटलाई पानी दिने र उनीहरूलाई सुन्दर बनाउनको लागि उत्कृष्ट छ।
भोलि म भोली भोली के खाने गर्छु भनेर हेर्नका लागि ब्लग वरिपरि केहि हिंड्न गइरहेको छु।
Dolors de Castellteçol लाई जवाफ दिनुहोस्
पानीको बारेमा धेरै राम्रो सुझाव!
मसँग थर्मो २१ छ र मैले स्पीड १ पछि चम्चाको वेग छोडेको छु र मसँग २ छ,
टीएम २१ का साथ तपाईले थ्रोटल र वेग १ राख्नु पर्ने हुन्छ जुन मोडेलमा सब भन्दा ढिलो छ।
Ana CG भन्यो
नमस्ते, मलाई चार्ट रेसिपी मनपर्‍यो तर मलाई सबैभन्दा धेरै मन पराउने कुरा के यो हो कि मेरो श्रीमान् र मेरा बच्चाहरूले यसलाई धेरै मन पराउनुभयो। धन्यवाद र धन्यवाद, यो ठूलो सफलता भएको छ।
Ana CG लाई जवाफ दिनुहोस्
जब तपाई परिवारले टेबुल खाँदै खाना खानुहुन्छ भनेर कत्ति रमाईलो हुन्छ। मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो
धेरै राम्रो, मैले तिनीहरूलाई अन्तिम मिनेटमा भाँडामा उमालेको चिसो र फ्याँकियो!
कस्तो राम्रो विचार, तपाईले प्रयास गर्नुपर्दछ कि यसबाट कसरी धनी हुन्छ।
नमस्कार, हामीले आज यी चार्ट खाइसकेका छौं र मैले भन्नुपर्दछ कि यद्यपि मलाई यो तरकारी मनपर्दैन, यिनीहरू मूर्ख छन् र सबै भन्दा राम्रो यो हो कि तिनीहरूलाई पकाउन अल्छी छैन, पपरिका र अजिजतोसको स्पर्श। धेरै ठिक छ। हामीलाई यो चम्मच भाँडा कसरी तयार गर्ने भनेर सिकाउन हामीलाई ठूलो छ !!! धन्यबाद! १
मैले तिनीहरूलाई लामो समय सम्म बनाएको छैन र म तिनीहरूलाई माया गर्छु। मलाई लाग्छ कि म उनीहरूलाई यस हप्ताको खानाको लागि तयार गर्नेछु, सुसाना। शुभकामना
केवल महान !!!!!!!!!!
धन्यवाद तेरे, मलाई खुशी लाग्यो तपाईलाई यो मन पर्यो।
जब तपाई यो खर्च गर्नुहुन्छ, म तपाई संग छिट्टै हुनेछु भन्ने आशा गर्दछु, म एक टेरम्पिक्स खोज्दैछु र मैले तिमीलाई देखेको छु।
सबैलाई अभिवादन छ
एन्टोनियो खोज संग उत्साहित!
नमस्कार, तपाईलाई कस्तो छ? मैले भर्खरै तपाईलाई खोजेको छु र मलाई लाग्छ हामी एक अर्कालाई प्रायः भेट्ने छौं, यद्यपि म वर्तमानमा वैकल्पिक उपचारहरुमा समर्पित छु, म १ 18 बर्ष भन्दा बढि पेस्ट्री पेटी भैरहेको छु र मलाई सहयोग गर्न सक्षम हुने आशा गर्छु। जति सक्दो म गर्न सक्छु र तपाईले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ, मेरो घरमा म एक हुँ जसले जान्दछ कि ऊ दैनिक खाना पकाउने जिम्मामा छ, हामीसँग थर्मोमिक्स छ 31१ र म नतिजामा रमाईलो छु र यसले कसरी पकाउँछ भन्ने कुराले मलाई केही गर्न अनुमति दिन्छ। अन्यथा अकल्पनीय हुनुहोस्, त्यसबेलादेखि उदाहरणको लागि म त्यस्तो सहयोगको साथ राम्रो चामलको खीर बनाउन आलस्य हुने छैन, त्यसैले तपाईं वास्तवमै त्यस्ता कामहरू गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईंले सोच्नु अघि सोचेकै थिएन।
Patxi लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! म मेरो थर्मोमिक्स रिलीज गर्दैछु, जुन हुन्छ, मसँग यो लामो समयको लागि थियो र म यसलाई प्रयोग गर्ने आँट गरेन। मैले यो बत्ती बनाउने निर्णय गरेको छु, मेरो प्रश्न हो, जब तपाईले यसो भन्नु हुन्छ कि पपरिका थप्न तपाईले तापमान घटाउन कुर्नु पर्छ, तपाई कतिन्जेल कुर्नु पर्ने हुन्छ वा कुन तापमान ड्रप गर्नुपर्दछ?
तपाईको व्यंजनहरु राख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद, यो हामी मध्ये एक को लागी राहत भयो जो शुरुवात गर्नुभयो।
नमस्ते ली, हामीले यसको प्रतिक्षा गर्नै पर्दछ to ०० सम्म जान किनकी किनकि यदि त्यसो भएन भने, उमालेको तेलको साथमा पेपरिका जलाइनेछ। हामीलाई पछ्याउन र हामीलाई लेख्नको लागि धन्यबाद! अभिवादन।
नमस्ते केटीहरू, आज मैले तपाईंको पृष्ठ पत्ता लगाए। मैले भर्खरै tmx गरेको छु र मलाई यो यति "आवश्यक" थियो जस्तो लागेन। तपाईं जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ! यो महान छ !!!. म स्विस चार्डको साथ एक नुस्खा खोज्दै थिए र मैले फेला पारे। आज, मेरो घरका, हामी तिनीहरूलाई तपाईंको नुस्खा अनुसार खान जाँदैछौं; मा तिमीलाई भन्छु
मारिएन्जेल्सलाई जवाफ दिनुहोस्
कति राम्रो मारीá्जेल्स! हामी तपाईंसँग हामी पाएकोमा धेरै खुसी छौं। कस्तो आनन्दको लागी तपाईलाई यो चार्ट मनपर्‍यो, सत्य यो हो कि ती स्वादिष्ट छन्। ठिक छ, केहि छैन, म तपाईंलाई यहाँ वरिपरि धेरै भेट्ने आशा गर्दछु ताकि तपाईं आफ्नो थर्मोमिक्सको फाइदा उठाउन जारी राख्नुहुनेछ। अवश्य पनि, तपाइँले कुनै पनी नुस्खाको बारेमा तपाइँलाई सबै प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। शुभकामना!
चार्ट मुलीहरू, महान। यो तरकारीहरू खाने तरिकाहरू हो तर रमाइलो। घरमा उनीहरूले यो मन पराउँछन्। अंगालो।
कति राम्रो मारिge्जेल्स, म धेरै खुसी छु। र अब ... अर्को रेसिपीका लागि!
चार्ट कति राम्रो भयो! मलाई वास्तवमै सबै प्रकारका तरकारीहरू मनपर्दछ र तपाईं मलाई धेरै विचारहरू दिनुहुन्छ! म तपाईंलाई मात्र भन्न सक्छु कि धेरै धेरै धन्यको लागि धन्यबाद !!! चुम्बनहरू
म यसमा नयाँ हुँ र अर्को दिन मैले टोर्टिला चिप्स बनाएँ र यो प्यूरीको साथ बाहिर निस्कियो। मैले के गल्ती गरेको छु?
सुनिलाई जवाफ दिनुहोस्
जय ग्यालन भन्यो
नमस्कार, ओएस म सुझाव दिन्छु कि तपाईं खाना पकाउने पानी बिरूवाहरूमा पानी प्रयोग गर्नुहोस्
Lampia glan लाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो विचार, महिमा, कि पानी भिटामिन र पोषकले भरिएको छ। सल्लाह को लागी धन्यवाद! अंगालो र हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद।
पिलि कभल्ट भन्यो
यो नुस्खा अर्को दिन यो खानेको लागि रातमा बनाउन सकिन्छ?
Pili Calvet लाई जवाफ दिनुहोस्
इरेन थर्मोरसेटस भन्यो
पिलर पक्कै पनि !! वास्तवमा, म प्रायः अर्को दिन उनीहरूलाई टुपरवेयरमा काम गर्ने अवसरमा लिन्छु। तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ, हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद !! 🙂
इरेन थर्मोरसेटसलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, म हाम्रो ब्लगमा नियमित हुँ, चार्ट बनाउने विधि खोज्दै, मैले यो फेला पारे, तर मसँग प्रश्न छ, मैले कांचमा कति पानी राख्नु पर्छ? तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद।
ईन्कारलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले आज विधि बनाएको छु र शंका के छ भने एक पटक मैले प्याट्स र चार्ट पकाइसकेपछि पानी निकाल्नु पर्छ किनभने मैले त्यसलाई फ्याँकिसकेको छु र किनभने यो थर्मोमिक्स टीएम २१ छ। मसँग पुतली छ र व्यावहारिक रूपमा उनीहरू शुद्ध भए, तिनीहरूले राम्रो थिए तर इरादा उनीहरूले छुट्टि खानुहोस्
एक हजार जवाफ दिनुहोस्
प्याडेनास सम्पूर्ण गहुँको पीठोसहित, नुटेलाबाट